Wood caaga WPC mashiinka caag qoryo mashiinka - Shiinaha Qingdao Hegu Wood-caaga
Description of alaabta WPC.
Description of alaabta wpc:
1, wax soo saarka New: The qoryo-caag ah waa nooc cusub oo wax isku dardaro habka of isku qasin, exruding, qalapka, hualing off iyo goynta,
2, Waxyaabaha: isticmaalaa PVC, PP, cusbi PE ama caag dib loo iyo fiber dhirta (budada qoryo, buunshaha, caws engegan oo kale, iwm) sida wax cayriin.
3, Faa'iidooyinka: Noocan oo qoryo-caag ah ma aha oo kaliya aad u la mid ah qoriga dabiiciga ah ee muuqaalka iyo dareemayaa, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin sifooyin isku mid ah, sida alwaax of excisable, planeable, sawable, gacanta la ekaan, heerka bibulous hooseeyo, iska caabin ah qoyaan wanaagsan, mothproof , caabiga wax xagta oo, iska caabin wanaagsan in acid iyo alkali, anti-daxalka, iyo waxa ay leedahay muujinta ah ee iska caabin ah dabka. Products waa non-sun ah, oo aan u nijaasayn, deegaanka-friendly iyo badbaadin-energied, oo aan formaldehyde, benzene iyo ammonia iyo waxyaabaha kale ee waxyeelada leh.
4, Arjiga: waxyaabaha qoryo-caag ah waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in lagu tumo dibadda, u dhow dhismaha biyo, balakoonka, naqshadaha muuqaalka, kuraasta iyo kuraasta, dayrarka, albaabada gudaha iyo daaqadaha, alaabta guriga, iwm
WPC profile mishiino / mashiinka WPC extruder / qoryo mashiinka kooban oo caag ah
WPC mashiinka Halabuurka caag qori oo ay ku jiraan fiicni,
qoryo Miller, WPC granulator, line WPC profile extrusion,
sulubid mashiinka, cadayashada mashiinka, mashiinka embossing,
toobinta WPC extruders fur double,
WPC decking mashiinka line-soo-saarka.
WPC mashiinka / qoryo line caag extrusion guddi derbiga mashiinka farcan / wpc
line WPC saarka la extruder fur double toobinta
qoryo mashiinka farcan caag / caaga WPC qoryo Machine
socodka Production for mashiinka decking WPC caag qori
1, Diyaarinta wax ka:
alwaax wax budada: budada qoryo 80-100mesh, waxaa la samayn karaa ka balka qoryo, arabikhi oo bariis ah, caws engegan oo bariis ah, arabikhi oo sarreen ah oo caws, staw suuf iyo Ture beeraha. baahida loo qabo mashiinka waa dhagaxshiidkana dhexdaada qoryo iyo mashiinka pulverizer
wax caag ah, dib loo PP / PE caag ah ka dib markii lagu dhaqo iyo burburiyo jajabi. baahida loo qabo mashiinka dhaqidda waa caag ah oo line burburiyo.
2, WPC wax qodan iyo granulating
Dhexgalo, gelin wax oo dhan mishiinka qodan, sida PP / PE jajabi oo dib loo, budada qoryo, lagu daro kiimiko
Granulating: waxaa muhiim ah in la isticmaalo mashiinka sare oo tayo leh granulating in la sameeyo dhagaxyada WPC, nidaamka qoyaan exhuasting waa lagama maarmaan u ah geeddi-socodka granulating.
3, waxyaabaha WPC daaweynta extrusion-taaj-dusha
Extrusion iyo wax taaj oo kale: Our toobinta extruder fur double waxaa si gaar ah loogu talagalay waxyaabaha WPC tayo sare leh extrusion, waxa ay ka dhigi kartaa wax WPC si buuxda isku qasan oo dhalaalay iyo labis, xooji caaryada wanaagsan deisgned iyo dhaqmaan, qalab goynta online, our Wood caag profile WPC mishiinka awooddo sameeyaan waxyaabaha wanaagsan WPC, sida prodfiles decking, profiles beerta, profiles kursi, profiles pergoza, profiles nidaamka cay.
Daaweynta dusha: sulubid, cadayashada iyo habka embossing ka dhigi kara wax soo saarka WPC dabeecadda hadhuudh alwaax kaas oo wanaagsan by macaamiisha aqbalay.
Isku darka A of qoryo dabiiciga ah iyo fiber caag foomamka darka qoryo-caag ah. Waxay kaa caawin yaraynta miisaanka guud ee gaadhiga, oo haddana, waxay wanaajisaa hufnaan shidaalka ay. Darka caag Wood yihiin bedel low-hoodu iyo bey'ada-friendly in ay ka kooban oo caag ah iyo steel in codsiyada dhismaha. Sidaa awgeed, ay baahida joogto ah u koraya ee suuqa.
The suuqa darka qoryo-caag ah waxaa segmented by nooc: polyetylen (PE), Polypropylene (PP), Polyvinyl Chloride (PCV) iyo kuwo kale. Polyetylen darka caag ah oo qoryo ku salaysan xukumaan warshadaha. Qeybta dhismaha & dhismaha alaabta waxaa loo arkaa in ay macaamiisha ugu badan ee polyetylen iyo Chloride Polyvinyl darka qoryo-caag ah. Qaybaha qeybta baabuurta ku yimaado soo socda halkaas darka qoryo-caag ah waxaa loo isticmaalaa in qaadashada ka mid ah qaybaha baabuurta fudud
ku saleysan codsigooda, suuqa this ayaa segmented dhismaha & dhismaha alaabta, decking, dayrka, alaabta warshadaha & macaamiisha, qaybaha baabuurta, iyo dadka kale. Ka mid ah kuwan, dhismaha iyo dhismaha qeybta muuqatay sida ugu weyn ee suuqa darka qoryo-caag ah oo caalami ah.
Previous: Wood caaga WPC decking WPC mashiinka co-extrusion line
Next: Wood caaga WPC wpc mashiinka mashiinka albaabka
Wood caaga Wpc Machine
Wpc fiicni Machine
Wpc Wood caaga Makiinado
line extrusion biibiile PE 20-110mm
Cheap PriceList for Beion Pvc Profile Extrusion...